Zimbabwe Peace Project Inoti Nyaya dzeMhirizhonga Dziri Kukwira Munyika
Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP, rinoti mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika, ari kuramba achiipa kubva pakatanga kutaurwa zvakanyanya nyaya yesarudzo nemapato ezvematongerwo enyika.
Mugwaro rakaburitswa nesangano iri mukupera kwesvondo, ZPP inoti mapato eZanu PF neMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, akatotanga kare gadziriro yekutsvaga rutsigiro, izvo zvakwidza mhepo yezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Gwaro iri rinotarisa mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika mumwedzi waKubvumbi, uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mhirizhonga yakaitika mubato reMDC T imwe yenyaya dzakatariswa nesangano iri.
ZPP inoti nyaya dzemhirizhonga dzakadzikira zvishoma muna Kubvumbi kusvika pa 977, zvichienzaniswa nedzinodarika chiuru nezana dzakaitika muna Kurume.
Mutauriri weZPP, VaWellington Mbofana, vaudza Studio7 kuti kudzikira uku kwakakonzerwa nekuderera kwemisangano yeZanu PF yekusaina gwaro rekuramba zvirango zvinonzi nebato iri zvakatemerwa Zimbabwe.
Hurukuro naVaWellington Mbofana